DIYAARADAHA ADUUNKA UGU HALISTA BADAN EE LAGU SAFRO "SAWIRRO"
Waxaa batay 30kii sano ee ugu dambeysay safarada diyaaradaha aduunka loogu kala socdaalo,iyadoo ay jiraan kumanaan shirkado oo ka ganacsada sidii dadka iyo xamuulka ay ugu kala qaadi lahaayeen qaaradaha aduunka,sida ugu fudud isla markaana ah amaanka ugu wanaagsan ee lagu safro,culimada sayniska waxay sheegeen in 200 boqol sano isku xigta hadii maalin walba aad diyaarad ku safartid,waxay ka amaan fiican tahay adigoo 1 bil gaari ku safra,sidaa awgeed waxaa la yiraahdaa "Flying Still One of Safest Ways to Travel".
Shabakada SOLAPORTAL waxay idin soo bandhigeysaa shirkadaha diyaaradaha ugu halista badan ee la raaco,kuwaasoo loo kala saaray inta sano ay jiraan,shilalka ay galeen iyo qasaaraha naf iyo maal.
Shirkadan diyaarada ee Sriwijaya waa tan 3aad ee uga baaxada weyn wadanka Indonesia,shirkadan ma leh shahaadada caalamiga ah ee badbaada diyaaradaha,kama diiwaan gashna FAA "Federal Aviation Administration" - waxaa gebi ahaan laga mamnuucay hawada wadamada barwaaqa sooranka Yurub "EU",diyaaradaha ay isticmaalaan waa qadiim,waxayna mar walba halis ugu jiraan shil.
2- Air Bagan
Dhamaan diyaaradaha aan qoraalkan kaga hadleyno waxaa laga mamnuucay in hawada Yurub ay soo dul maraan hadii laga reebo Air Bagan,waxaa la dhisay shirkadan sanadkii 2004,ilaa iyo xiligaa waxay gashay laba shil oo sababay dhaawac iyo dhimasho,iminka isbedel aad u weyn ayaa lagu sameeyay,taasoo ay doonayaan in ay ku helaan waraaqda aqoonisga ee diyaaradaha caalamiga ah ee aduunka.
Shirkadan diyaarada ee Susi dhibka ugu badan wuxuu ka soo gaaraa garoomada ay ku degto ee wadanka Indonesia oo ah kuwa aan laami ahayn oo inta badan ay ag degan yihiin qabaa'ilaadka duur ku noolka ah oo u diida in ay dhulkooda ku soo degto,dhamaan shaqaalaha safaaradaha Mareykanka iyo Yurub waxaa ka saaran mamnuuc ah in aysan raacin karin,shilal fara badan oo dad badan ay ku geeriyoodeen ayaa Susi ku dhacday dhowr jeer.
4- Kam Air
Diyaaradan oo laga leeyahay wadanka Afghanistan ayaa lagu tilmaamay in ay tahay mida ugu halista ah ee lagu safro,2003 ayaa la dhisay ilaa iyo waqtigaa waxaa ku dhacay shilal halis ah oo dad badan ay ku geeriyoodeen,kii ugu horeeyay wuxuu ahaa mid 96 qof oo rakaab ah iyo 8 shaqaale ah ay ku naf waayeen,waxaa kale oo lagu xasuustaa in marar badan diyaarada oo hawada ku jirta la soo wacay oo la yiri waxaa saaran Bam gacmeed,iyadoo lagu qasbay in gegi diyaaradeed oo u dhow lagu dejiyo,hawada waqooyiga mareykanak iyo Yurub waxaa laga mamnuucay sanadkii 2010,iyadoo laga yaabo in aan dib loogu ogolaan doonin.
Shirkada diyaaradaha ee SCAT waa kuwa loo yaqaano "LOW COST" ama sida raqiiska ah lagu raaco oo 20kii sano ee ugu dambeysay ku soo batay dhamaan aduunweynaha,waxaa laga leeyahay wadanka Kazakhstan oo ku taala bartamaha Aasiya,waxay u kala duushaa magaalooyinka isla wadanka Kazakhstan,shirkadan waxaa la yiraahdaa diyaaradaheeda Qabuur duuleysa,shilal badan lama kulmin tan iyo intii la dhisay sanadkii 1997, 2013 ayaa shil ku dhacay Scat airline waxaa ku geeriyooday 21 qof,iyadoo ay jiraan shilal kale.
Sababaha ugu weyn ee shirkadan looga mamnuucay hawada Yurub waa iyadoo gebi ahaan shirkada caymiska ay u diideen in ay Insurance geliyeen,iyagoo og in farsamada iyo dayactirka diyaaradahoodu uu yahay mid aad u hooseeya oo mar walba shil geli kara.
Shirkadan diyaarada ee Nepal Airlines waxaa la aas'aasay sanadkii 1950,iyadoo u kala duusha 36 wadan oo Aasiya iyo bariga fog ah,waxay ka dhisan tahay wadanka buuraleyda iyo dhul gariirka caanka ku ah ee Nepal oo reer Yurub ay u dalxiis tagaan.
Dhamaan wadamada Yurub waa laga mamnuucay in ay u duuli karaan,iminka waxay ku tala jiraan iibsiga diyaarado casri ah,si ay ugu duulaan bariga dhexe iyo Yurub,taasoo qasab looga dhigay in ay helaan waraaqda diyaaradaha ee loo yaqaan " Safety certificate" - Nepal Airlines waxay gashay shilal aad u tira badan oo dhulka buuraleyda ah ay diyaaradahooda ku dhacaan,iyadoo dhib ay tahay sidii loo badbaadin lahaa dadka ku dhaawacma dhicitaanka diyaaradaha.
Diyaaaradan Lion Airlines oo laga leeyahay wadanka Indonesia waxaa la dhisay sanadkii 2000,iyadoo u kala duusha 80 magaalo oo wadanka Indonesia iyo wadamada la jaarka ah,waa shirkad shilalkeeda uu aad u badan yahay,tan iyo xiligii la aas'aasay waxay gashay 8 shil oo sababay dhimasho iyo dhaawacyo halis ah.
Shirkadan waxay wada shaqeyn ka dhexeysaa shirkadaha Thai iyo Malaysian Airlines,iyagoo wada isticmaala Code share,shilalka ay gasho waxaa ka mid ah iyadoo garoonka ka baxda,biyo ku degta iyo markii ugu dambeysay oo dhowr maalmood meel ay ku dhacday la garan waayey.
Bisha Janaayo ee 2015 Wasaarada Gaadiidka ee wadanka Indonesia waxay go'aan ku gaartay in ay ka joojisay 53 magaalo oo ay u duuli jireen,ilaa iyo ay ka soo hagaajiyaan qaabka ay u dayac tiraan diyaaradaha iyo badbaadada.
Shirkada Tara Air waxaa la dhisay sanadkii 2009,waxaa laga leeyahay wadanka Nepal waana diyaaradaha u kala safra dhulka dalxiisak ee buura leyda Nepal,shilalka faraha badan ee Tara Air waxaa keena,iyagoo ka dega garoomada ugu halista badan ee aduunka oo ku yaala isla wadanka Nepal iyo isticmaalida diyaarado duug ah oo meel kale aan loo adeegsan,wax waraaq aqoonsi ah oo dhanka duulitaanka ah ma heystaan,gebi ahaan waxaa laga mamnuucay wadamada Yurub iyo bariga fog.
9- BlueWing Airlines
Shirkadan BlueWing Airlines oo hawl gasha wadanka Suriname oo koofurta mareykanka waxaa la aas'aasay sanadkii 2002 waxay u kala duushaa wadamada Guyana,Brazil,Venezuela iyo jasiiradaha loo yaqaan Caribbean,shirkadan waxaa laga mamnuucay hawada Yurub,iyadoo dib loogu ogoladday sanadkii 2007,2010 ilaa iyo iminka waxaa lagu daray liiska diyaaradaha aan loo ogoleyn in ay soo caga dhigtaan Yurub,shilal fara badan ayaa ku dhacay oo rakaab badan ay ku naf beeleen.
10- Ariana Afghan Airways
Shirkada Ariana Afghan Airways waa tan ugu weyn wadankaas,hadii loo eego xamuulka iyo lacagaha ay ka sameyso ganacsiga duulitaanka,shirkadan waxaa la aas'aasay sanadkii 1955 ilaa iyo waqtigaa waxaa ku naf wayay 154 qof, iyadoo 19 diyaaradood gebi ahaan ay ku burbureen,sanadkii 2006 ayaa waxaa laga mamnuucay hawada Yurub,iyadoo iminka u kala duusha wadamada bartmaha Aasiya iyo bariga dhexe.
11- Daallo Airlines
Shirkadan Daallo Airlines oo si wadajir looga kala leeyahay wadanka Somalia iyo imaaraadka carabta waxaa la hirgeliyay sanadkii 1991,iyadoo ay ka dambeeyeen Mohamed Ibrahim Yassin and Mohammed Ibrahim Yassin Olad,waxaana laga dhisay wadanka Jabuuti.
Shirkada Daallo waxay macaamiisheeda ku tilmaameen in ay tahay diyaarada aduunka ugu qaab daran dhan kastoo laga eego,hadii ay ahaan lahayd qaabka dadka raaca loola macaamilo,dhanka badbaadada,diyaaradaha oo waqtigii loogu tala galay in ay duulaan ka gudbay iyo halis dhanka duulista.
Daallo Airlines weli shil rakaab ay ku naf waayeen ma qabsan,iyadoo sanadkii 2009 laysku dayey in la af-duubo iyo 2010 oo la doonayey in la qarxiyo,qaabka ay u soo bandhigaan ganacsiga shirkada iyo badbaadinta rakaaba mar walba waa sir qarsoon,taasoo shaki aad u weyn gelisay dadka u raaca wadamada ay u safarto.
Bishii Feberaayo 2015 Daallo iyo Jubba Airways ayaa mid noqday,iyagoo la baxay magaca African Airways Alliance.
12- Merpati Airlines
Shirkada diyaaradaha ee Merpati Airlines waxaa laga leeyahay wadanka Indonesia waxaana la dhisay sanadkii 1962,shirkadan waxay u kala duushaa 25 magaalo wadanka Indonesia,Malaysia iyo wadanka East Timor,tobankii sano ee ugu dambeeyay waxaa ku dhacay shilal kala duwan oo dad ku dhow 50 qof ay ku naf waayeen,dowlada Indonesia waxay dhowr jeer ka qaadeen shatiga duulista iyo shaqada ee shirkadan,iyadoo inta badan dhaqaalo xumo ay la soo deristay.
Liiska diyaaradaha laga mamnuucay in ay soo galaan hawada Yurub: